Ukucubungula amazambane. Amaphuzu okukhula kanye nama-vectors wethemba - umagazini "wePatato System"
main Ubunjiniyela / Ubuchwepheshe
Ukuqhutshwa kwamazambane. Amaphuzu Okukhula kanye Namathemba Ethemba
Imvamisa sikhuluma ngomkhakha wokuhlanzela amazambane ongaphansi eRussia. Impela, kunzima ukubiza isabelo esibalulekile samaphesenti ayi-15 womthamo ophelele otshaliwe ezweni (lokhu impela kungakanani izibalo ezabiwa emkhakheni). Noma kunjalo, isimo semakethe siguquka kancane kancane, indima yamabhizinisi wokwenza okusanhlamvu, ama-chip, ama-fries ama-french, amazambane ahlanganisiwe, njll. Iyaqala ukubonakala. Amafemu amasha ayavulwa, kanti imigqa elandelayo isivele yethululiwe. Futhi lokhu kuqhubekela phambili kusivumela ukuba nethemba lokuthi imboni yamazambane ezweni lethu iba nekusasa eliphumelelayo.
UKWENZIWA KOKWENZIWA KWEFRITO (DIVISION PEPSICO)
Iprosesa enkulu yamazambane yaseRussia: ngonyaka inkampani ithola cishe amathani ayizinkulungwane ezingama-360 izinto ezingavuthiwe
Wonke amazambane asetshenziswa yinkampani ukwenza ama-chip akhule eRussia. Khumbula: amazambane wokuqala wase-Russian chips wokufakwa kuma-chips ka-Lay wakhula ngonyaka we-2002 ngenani lamathani angama-4 esifundeni saseMoscow.
Inkampani ithenga izinhlobo ezikhethekile - ngokuqukethwe okushukela okuncishisiwe nokuqukethwe okuphezulu kwesitashi. Okwamanje, ulayini wokukhiqiza uhlanganisa izinhlobo zesimanje ezigqama ukunambitheka kwazo okuhle, kepha ziyinkimbinkimbi ekukhiqizeni, zidinga izinga eliphakeme lobuchwepheshe bezolimo.
Abakhiqizi abangaphezu kuka-50 bahlinzeka ngezinto ezingavuthiwe, cishe amapulazi ayi-10 akhiqiza amazambane wembewu ngokuyalelwa yinkampani. Iningi lalezi zinkampani besebenzisana noFrito Lei Managing iminyaka engaphezu kwemihlanu.
Bonke abathengisela izinto ezingavuthiwe kanye nembewu ababambiqhaza ohlelweni "Abaholi bomkhakha wezolimo", olwethulwe yinkampani ngonyaka we-1996. Uhlelo lolu luhlose ukuthuthukisa ikhwalithi kanye nokukhiqiza amazambane.
Njengengxenye yalolu hlelo, abalimi bahlinzekwa ngezinto ezisezingeni eliphezulu zokutshala nemishini yokuvuna. Uhlelo lolu luhlinzekela nokutshalwa kwezimali emishini yezitolo zemifino enohlelo lokulawula isimo sezulu. Amapulazi athuthukiselwa ukuthengwa kukamanyolo nemikhiqizo yokuvikela izitshalo, athola usizo oluqhubekayo nezeluleko zesazi, futhi azibamba iqhaza kumasifundisane ngokushintshaniswa ngolwazi.
Ngenxa yokubamba iqhaza ohlelweni lwezolimo, abalingani bePepsiCo bakwazi ukukhulisa kakhulu isivuno esijwayelekile samazambane (amathani angama-30 nangaphezulu ngehektare - kucatshangelwa iqiniso lokuthi izinhlobo ze-chip azihlukaniswanga ngezithelo eziphezulu).
Yathulwa ngoSepthemba 2002
Isebenza ngaphezulu kwamathani ayizinkulungwane ezingama-210 zamazambane akhethekile ngonyaka, ikhiqiza amathani angaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu zemikhiqizo eqediwe (izinto ezingaphezu kuka-100). Okwamanje, inkampani inemigqa eyisishiyagalombili yokukhiqiza, kwenziwa amaphrojekthi amasha okonga izinsiza kanye nokusebenza kwamandla kwamandla. Le nkampani ingumthengi omkhulu wamazambane wamazambane eSifundazweni Esikhulu Sombuso. Ingxenye yesithathu yempahla eluhlaza edingekayo ithengwa kubahlinzeki abavela esifundeni saseMoscow.
Waba yisitshalo sokuqala sePepsiCo sokuqala “esiluhlaza” eRussia, sakhiwa ngokwezidingo eziqinile zezemvelo futhi sathola isitifiketi se-LEED (Ubuholi Kwezamandla Nezemvelo). Ngo-2017, kwethulwa isakhiwo esiyinkimbinkimbi sezikhungo zokwelapha kuleso sitshalo; ngo-Agasti 2019, kwavulwa umugqa omusha wokukhiqizwa kokudla okulula.
Manje inkampani inemigqa emihlanu: emibili yokukhiqiza ama-potato chips, amabili akhiqizwa ama-crackers kanye nomugqa owodwa wokudla okusanhlamvu Cheetos. Izinto zokwenziwa ezingavuthiwe kanye nezithako zikhula ngamabhizinisi eningizimu yeRussia, lesi sitshalo sisebenzisana namapulazi angama-26 ahlinzeka ngamazambane wamachizi nofulawa ukukhiqizwa kwama-crackers.
ISINYATHELO SEQINISO NGENOVOSIBIRSK
Amathuba okwakha isitshalo sePepsiCo esifundeni saseNovosibirsk asecabangiwe yile nkampani iminyaka eminingana
Ukuvula ibhizinisi kulesi sifunda kufanele kukhuphule ukusebenza kahle kwenkampani ebambe izinto ngayo: imikhiqizo yokuthumela esuka enkabeni yezwe iye eSiberia, iFar East neKazakhstan iyabiza impela. Futhi, inkampani ibuyele kulolu daba ngoFebhuwari 2019: esithangamini sokutshala imali eSocrhi, umongameli wePepsiCo eRussia, Belarus, Ukraine, eCaucasus naseCentral Asia Neil Starrock, umbusi wesifunda saseNovosibirsk u-Andrei Travnikov nomqondisi jikelele we-Agency for Investment Development esifundeni saseNovosibirsk U-Alexander Zyryanov usayine isivumelwano ngokwakhiwa kwefekthri yezilokotho eNovosibirsk.
Ibhizinisi elisha lizokhiqiza ama-chips nama-crackers ngaphansi komkhiqizo weLay's, Cheetos kanye neKhrusTeam. Umthamo webhizinisi olinganiselwayo uzoba cishe ngamathani ayizinkulungwane ezingama-50 emikhiqizo eqediwe ngonyaka. Ukutshalwa kwemali kuphrojekthi kulinganiselwa ku-RUB 12 billion. Ukwethulwa kwesitshalo kuhlelelwe u-2021.
Le nkampani ihlela ukuthenga izinto ezingavuthiwe zokwenziwa kwama-chips kwabakhiqizi bezolimo bendawo futhi kuzobasiza ukuba basungule ukukhiqizwa kwamazambane asezingeni eliphakeme e-chip. Kuzokwethulwa uhlelo olukhethekile lwezolimo esifundeni, labo abazobamba iqhaza kulo bazothola izinto zembewu, ukusekelwa kwezimali okudingekayo, futhi bazoqeqeshwa ukusebenza nezinhlobonhlobo ezintsha. Izindleko zohlelo lwezolimo azikaze zimenyezelwe, kuyaziwa ukuthi lezi kuzoba yizimali ezengeziwe kwizibhengezo esele zimenyezisiwe ezingama-12 billion.
Okwamanje, izinyathelo zokuqala zokulungiselela isiza sendawo eluhlaza sezivele zithathiwe. Ngakho-ke, ezifundeni ezinhlanu zesifunda saseKemerovo (esisemngceleni weNovosibirsk) ngo-2019 kwabekwa iziza zokuhlola ezingamahektare ayi-XNUMX ubukhulu, lapho kwatshalwa khona amazambane amazambane.
LEMUVA LESIQHAWU ESISEKELAYO LESITOLO SAMAHHALA waseFrance
Yathulwa ngo-Ephreli 2018. Kungumsebenzi ohlanganyelwe weBelaya Dacha JSC neWundlu Weston Maijer. Iphrojekthi le iyasetjenziswa endaweni yezomnotho ekhethekile yeLipetsk. Isabelomali sephrojekthi: ama-euro angaphezu kwezigidi ezingama-120.
Umthamo ohleliwe wesigaba sokuqala ungamathani ayi-16 ngehora (noma amathani ayizinkulungwane eziyi-100 wemikhiqizo eqediwe ngonyaka ngomthamo wokucubungula ongaba ngamathani ayizinkulungwane ezingama-200 wezinto zokusetshenziswa). Lesi sitshalo sihlela ukwakha isigaba sesibili futhi asikufaki ngaphandle ukubukeka kwesithathu.
Ingxenye (cishe i-30%) yesidingo sesitshalo sezinto zokusetshenziswa enikezwe isizinda sayo sendawo eluhlaza esifundeni saseTambov. Iphinde yakha isitoreji sayo samazambane ngamathani angama-7500, nenqubo ezenzakalelayo yokulawula ukukhiqizwa nokubheka wonke amapharamitha adingekayo. Umthamo osele wezinto zokusetshenziswa (izinhlobo zamazambane Innovator, Challenger) ukhula ngabalimi lapho kwenziwa izinkontileka zokuhlinzekwa kwesikhathi eside.
Kuphela izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme ezinikezwa isitshalo. Ngezindlela eziningi, lokhu kungukufaneleka kwesikole sasepulazini, esihlelwe yi-JSC "Belaya Dacha" ngaphambi kokuqaliswa kwebhizinisi. Ngesikhathi somsebenzi wakhe, othisha besikole - izazi zezolimo namahlathi abanolwazi lwebhizinisi - basize abalimi bamazambane abavela ezifundeni eziyi-16 zezwe ukuba babe nobuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza, obekwenza kube nokwenzeka ukwandisa isivuno sifike ku-500 c / ha. Abalimi bafunde ukutshala izilimo eziyizigaxa ezinobukhulu obuthile, isimo esithile, eziqukethe inani elishiwo ngokuqinile lezinto ezomile; Lwazi ubuchwepheshe bokugcina amazambane amazambane.
Umthengi wokuqala wemikhiqizo yesitshalo kwakuyichungechunge lokudlela lakwaMcDonald. Lesi sitshalo siphinde sinikele ngemikhiqizo yaso kwezinye izikhungo zokupheka kanye namaketanga wokuthengisa ezweni lonke. Isitshalo se-LEM Weston Belaya Dacha sikubheka njengomsebenzi waso ukwenaba ngokuphelele isidingo sothosi baseFrance eRussia, kanye nokuhlela ukulethwa kwemikhiqizo phesheya. Kuyaqapheleka ukuthi izinyathelo ezibalulekile kule ndlela sezivele zithathiwe: ekuqaleni konyaka ka-2019, ngokwezibalo, umthamo wokufakwa kwama-fries amaFrance kwiRussian Federation uye wehla cishe ngesigamu, kanti ukuthunyelwa kwamanye amazwe amaFrance aseFrance kukhule cishe amahlandla ayisithupha.
"I-MAXIM GORKY PLUS"
Tshala ukukhiqizwa kwamafatata amazambane.
Namuhla siphethe isikhundla esizihola phambili eRussia. Njalo ngenyanga, amathani ayikhulu emikhiqizo efakiwe angena emakethe. Ama-100% womkhiqizo ophelele athunyelwa ngaphandle.
Ngo-2019, inkampani yamemezela izinhlelo zayo zokwakha isitshalo sesibili sokukhiqiza amazambane amazambane esifundeni saseNovozybkovsky esifundeni saseBryansk. Umthamo wokukhiqizwa kwebhizinisi lesikhathi esizayo uzofinyelela kumathani ayizinkulungwane eziyi-120 ngonyaka. Umthamo wokutshalwa kwemali kuphrojekthi awukamenyezelwa.
UTyumen agrofirm ungomunye wabaholi eRussia ekukhiqizeni amazambane wethebula nembewu
Ukuvulwa kwendawo yokulungisa izinto kuyindlela entsha ekuthuthukisweni kwenkampani.
Lesi sitshalo sikhiqiza ngokukhethekile amazambane aphekwe ngesigamu aphekwe ngengxenye yemvelo kanye namazambane amasha asikiwe asetshenzisiwe. Kuvulwe ngoSepthemba 2019.
Lesi sitshalo sakhiwa ngesikhathi sokurekhoda: ngaphansi kweminyaka emithathu. Izindleko zephrojekthi yokutshala imali zaba cishe ama-ruble ayizigidi eziyizinkulungwane eziyikhulu namakhulu amabili. Umthamo omkhulu wesitshalo ucubungula amathani ayizinkulungwane ezingama-30 wezinto zokusetshenziswa futhi kukhiqizwe amathani ayi-15 wemikhiqizo eqediwe ngonyaka.
Izimpahla zithengiswa ngabathengisi futhi zilethwe emkhakheni weHoReCa kanye neB2B, hhayi kuphela esifundeni sase-Urals Federal.
Ngo-Okthoba 2019, imikhiqizo yesitshalo se-KRiMM yaqala ukubekwa endaweni yokuqokwa ngokuthi “Best Eco-Product for Restaurants” embukisweni wePIR EXPO eMoscow. Ngemuva kwalokho, amabhizinisi amakhulu wokudlela ukudla amakhulu aveze intshisekelo yawo ekuthengeni amazambane eTyumen.
Leli bhizinisi laseTyumen alinamaphrofayili "amazambane" kuphela. Isitshalo sikhiqiza imifino ehlanziwe, ehlutshiwe, nemifino yezimpande: izaqathe, izimbiza, amazambane, iklabishi nabanye. Ukuqinisekiswa komkhiqizo kuhlanganisa nesaladi lamaqabunga (i-ruccola, ummbila, u-iceberg, i-chard, i-romano) kanye nokuxuba imifino, amakhambi kanye namasaladi.
Iphrojekthi le iqalile ukusebenza kusukela ngonyaka ka-2018; ngo-Agasti 2019, lesi sikhungo savunyelwa.
Ukuvulwa ngokusemthethweni kwenzeka ngoNovemba 5, 2019. Inani lokutshalwa kwemali lifinyelela kuma-ruble ayizigidi ezingama-220. Indawo ephelele yesakhiwo sokukhiqiza idlula amamitha skwele ayinkulungwane. amamitha. Lesi sitshalo sizoqasha abantu abangama-3,4.
Le mikhiqizo ihloselwe ukudayiswa ngamaketanga wokuthengisa, amathofi, izindawo zokudlela, izitshalo zokuphaka ukudla nezinye izakhiwo. Kuthunyelwa kwenziwa kuKurgan, Chelyabinsk, Omsk, Tomsk naseSochi.
Ngokuzayo, lesi sitshalo sihlela ukukhulisa i-assortment yaso kanye nokwandisa inani lokukhiqiza.
Amaphrojekthi wokufaka amandla amazambane kufanele abhekwe eceleni, kuvame ukubhalwa ngawo emaphephandabeni, futhi abakhiqizi bezolimo banethemba labo kubona.
Ngokusho kwe-BEFL ukusukela ngoMeyi wowezi-2019, abantu bokuqala ukubamba phakathi kwabanikazi bomhlaba wezolimo eRussia Federation, abaphethe cishe amahektha ayisigidi. Omunye wabakhiqizi abakhulu kakhulu baseRussia benyama yenkomo, ingulube nenkukhu.
Ngoku kungenzeka, inkampani ingaba ngomunye wabakhiqizi abakhulu bemifino namazambane, futhi ivule nomkhakha wokufaka.
NgoFebhuwari 2019, abaphathi bamemezele ukutshalwa kwezimali kwama-ruble ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha. ekwakhiweni kwamathani ayizinkulungwane eziyikhulu zamazambane, iklabishi, izaqathi, njll kumahektha ayinkulungwane amathathu omhlaba oniselwe esifundeni saseTula, kanye nasekwakhiweni kwezindawo zokugcina nokusebenza kwemikhiqizo. Amasu okubamba avula indawo yokusungula imifino esezingeni eliphakeme ezosebenzela izidingo zokuthengiswa kwezindawo zokuthenga nokupheka. Ekuqaleni, inkampani izobandakanyeka kumalungiselelo wokuthengisa ngaphambi kokuthengiswa kanye nokupakishwa kwemifino namazambane, kodwa iMiratorg ayikhiphi amathuba okufinyelela ezingeni elithe xaxa lokucubungula futhi iqalise ukukhiqizwa kwayo kwama-chips noma ama-fries ama-french.
Inkampani yaseCanada ingomunye wabakhiqizi abakhulu kunabo bonke bemikhiqizo yamazambane efriziwe, umholi womhlaba wonke ekukhiqizeni amafriji aseFrance afriziwe (ukhiqiza i-1/3 kuwo wonke amafries aseFrance emhlabeni)
Inkampani ihlela ukubuya izodingida lolu daba ngonyaka. Ngaphezu kwalokho, ngoSepthemba 2019, inkampani yamemezela izinhlelo zokwenza umkhiqizo omkhulu wemifino namazambane onamandla amathani angama-300 ngonyaka eStavropol Territory.
Kumele kuqashelwe ukuthi iMirogog isivele inebhizinisi lokukhiqiza imifino efriziwe namajikijolo (imikhiqizo engaphansi kohlobo lweVitamin) esifundeni saseMoscow, izinto zokusetshenziswa ezazithengwe phambilini kubakhiqizi benkampani yangaphandle kanye naku-50% phesheya.
Ngo-2017, inkampani yayinezikhungo ezingama-47 zokukhiqiza emazwenikazi ayisithupha. Ihhovisi laseRussia belisebenza kusukela ngo-1999.
Iminyaka eminingi, inkampani ibilokhu icabanga ukuthi kungenzeka ukuthi kwakhiwe isitshalo sokupheka amazambane ezweni lethu. Ngakho-ke, ngonyaka we-2004, amacebo enhlangano yokwakha ibhizinisi ezifundeni zeVladimir noma iVoronezh axoxwa ngenkuthalo nabezindaba. Umthamo wokwakhiwa kwesitshalo bekufanele ube ngamathani ayizinkulungwane ezingama-40-50 wamazambane ngonyaka. Izindleko zephrojekthi zalinganiselwa ku- $ 100 million. Ngo-2005, izintshisekelo zenkampani zashintshela esifundeni iTyumen, kepha iphrojekthi ayizange yenziwe.
Ngo-2019, uMcCain ubuyele ekucabangeni kwalolu daba, kanye nePJSC Cherkizovo Group. Futhi indawo yebhizinisi isivele ikhethiwe ezifundeni zase-Oryol naseBryansk.
Ngeshwa, abahleli balo magazini abakwazanga ukuthola imininingwane eminingi eninginingi ngokuthuthukiswa kwale phrojekthi ezinsizakalweni zabezindaba zeMcCain nePJSC Cherkizovo Group.
Tags: 2019 No. 4ukucubungula amazambane
Izifo izaqathi: izindlela zamanje zokulawula